Mai Chibwe VekwaZimuto: Mibvunzo nemhinduro 3
Kubata murume/mukadzi avete noumwe munhu
Ukabata murume/mukadzi wako ane umwe munhu, zvinoreva kuti nguva yokupopotedzana neyokutsamwisana yakatopfuura kare. Chirega kutambisa nguva uchipopota. Munhu wawazvionera wega achivatana noumwe munhu haasi munhu wekubvunza kuti zvaita sei. Mirira vapedze zvavari kuita ugomuudza kuti chitora zvinhu zvako uende kwaunoda kuenda.
Kana wabata murume wako achivatana nomusikana webasa, kana kuti mukadzi wako ane mokomana webasa, usadzinga musikana/mukomana webasa uyu. Rega arambe achishanda kana une mari yokumubhadhara. Chokwadi ndechokuti haisi mhosva yake kuti avatwa naye.
Kabhinzi kane basa rei kumukadzi
Kubvunza kuti bhinzi ine basa rei pamukadzi zvakanofanana nomukadzi achibvunza kuti chombo chine basa rei pamurume. Kunakigwa kwemunhukadzi kwese zvako kunobva pabhinzi.Bhinzi ine mudzi wayo unotangira pasi payo wopatsana woita midzi miviri woti tande wakati umwe kurudyi umwe kuruboshwe gwechitubu wobatana nechitubu.
Kana zviya murume ari mukati mechitubu achikwiza mukati nechombo. Anenge achitokwizirira panopfuura nomudzi webhinzi zvinova zvinonaka chose. Ukuwo kana ari munhu akachenjera anokwanisa kuti uku ari mukati uku ari kukweizirira bhinzi chaiyo nemaoko. Kana kuti iye muridzi ange achizvikwizirira nemaoko uku achikoigwa nomurume.
Bhinzi ndiyo inoitisa kuti kuvata nomurume kunake manakire akunoita.
Kuti murume asahura ndingaite sei
Munhu wese anohura anohura nokuda kwechimwe chezvinhi zvishomanana zvinokonzeresa vanhu kuhura asi zvikonzero izvi zvakasiyana kuvakadzi nevavurme.
Murume kazhinji anohura kana akaziva kuti haasi kugutsa mukadzi wake wemumba. Izvi zvinoitiswa nokuti anoziva kuti anofanisa kunge achigutsa mukadzi asi haazivi kuti zvoitwa sei. Kuzoda kuhura uku kutsvaka kuiwa REASSURANCE noumwe mukadzi kuti anogona basa kuti agowana chokumhura mukadzi wake nacho. Chimwezve ndechokuti akakurira mumhuri ine vabereki vaihurirana zvaizikamwa nevana.
Chimwe ndechokuti haana SELF RESPECT saka haakwanisi kupa rukudzo kune umwe munhu iye asingazvikudzi.
Murume wako akangotanga kuhura hazviiti kuti azorega kuhura.
Hapana chaunokwanisa kuita kuti murume wako arege kuhura kana ambohura.
Kugeza chibereko kunoitwa sei?
Chibereko chinonetsa kuchigeza kumba nokuti hachikwanisiki kuti muridzi asvike mukati macho. Kamukova kechibereko kari mukati mechitubu uye kadikidiki zvokuti kana penzura chaiyo haikwanipo. Chibereko chinokwanisa kuda kugezwa dzimwe nguva, sokuti wabva mimba kana kuti waita anohi maFABROIDS mukati, unokwanisa kundosukwa chibereko. Asi kazhinji chibereko hachisukwi. Chinozvisuka. Asi kana uchifunga kuti pane zvinokunetsa, enda undoona murapi utariswe.
Mubobobo haukanganisi here nhumbu?
Mubobobo mushonga unotaugwa navanhu kuti kana murume/mukadzi ane mushonga uyu anokwanisa kuvata nomunhu wese zvake aada kuvata naye. Zvinoreva kuti anongohura nevakadzi/varume vevanhu.
Chokwadi ndechokuti hakuna mushonga unohu mubobobo. Unongori mutauro kuti vanhu vatyiswe nazvo kana vari vega. Hazviiti kuti munhu akwanise kuvata nomunhu asingadi kuvata naye, uyezve hazvigoni kuti uvatwe newe usingaoni mhunhu ari kuvata newe.
Hazvigoni chose chose. Munhu ava nemakore anopfuura gumi haafaniri kusaona kuti mubobobo mushonga wenhema wekutyisidzira vanhu vasina njere.
Kwandingawane mushonga wekusunga murume
Unokwanisa kutsvaka Mupasi rese kwemakore kana zana nemakumi mashanu asi chokwadi ndechokuti haufi wakawana mushonga wakadai.
Pane nyaya dzakawanda dzinotaugwa navanhu pamusoro pezvinoitika. Nyaya zhinji dzakatanga dziri dzekuti vanhu vaseke kusvika dzava pakuti vanhu vofunga kuti ichokwadi. Hazvikwanisiki kuti usunge murume kana mukadzi wako.
Kukisana kunoitwa sei?
Kana wafunga kukisana noumwe munhu, iyewo achida kukisana newe, ingokisanai usinga fungwa dzokuti zvinoitwa sei. Ukatotanga kufunga kuti zvinoitwa sei, ndipo paunotokanganisa kukisa kwacho. Kukisana kunoda kuitwa kana muri vanhu vanodanana kwete zvokuita chihure. Kana muchidanana kukisana kunonakidza.
Asi kana uri murume, usapinza rurimi mumuromo memmukadzi kusvika iye atanga kupinza rurimi gwake mumuromo mako kuratidza kuti ari kuda kuti utevedzere.
Kukisana kunoitisa zemo kuvakadzi nokuvarume.
Ndokumbirawo kubvunza kuti ndingashandisei kuti kuzasi kwangu kusaite hwema husinganzwisisiki,ndinoedza kugeza ndichiisa chigunwe asi pane hwema husingandifadzi,pane chandingageza nacho here kuty kasmell aka kasanzwika ndigare ndirifresh
Chokutanga ndechokuti usa jaira kuisa mvura mukati mechitubu. Chitubu hachigezwi mukati uye hakuna LIQUID yaunofanira kuisa mukati kuzhe kweurue hwemurume wako umwe chete.
Kana pane hwema hunobuda pachitubu, zvinoreva kuti une INFECTION saka unofanisa kukasira kundorapwa. Usanonoka.
kana wakamovata nomurume panguva yaunoziva kuti hwema hwaivapo, murume ngaaendewo kundorapwa nokuti akasadaro anoti zviya warapwa okupa utachiona hwacho futi.
Usaisa Perfume mukati mechitubu. Chitubu chinozvigeza chega mukati. Iwe unongogeza kuzhe uye pasi peganda rakafukidza bhinzi panova panoita gweme kana kuchipisa. Apa panogezwa ne Vinegar kamwe pavhiki, sezvaunoita muhapwa. Kana une muviri mukuru wogezazve muzvidya nepasi pemazamu panoita BACTERIA inoitisa hwema.
Ini ndaita dambudziko randoshuvira kuti dai rakurukurwa. Mushure
memakore maviri taroorana nemudzimai wangu ndakatanga kunzwa kushaiwa
shungu nekurara naye. Handizivi kti dambudziko ringava papi. Pamwe
ingatomira asi shungu chaidzo dzkumuisa ndisina. Chandava kutya
ndchekuti iye anenguva dzaanenga achidawo chaizvo asi ndotadza
kumuitira zvaaonoda. Saka pamwe achafungira zvakawanda, ndinotyira
kuputsika kwemhuri yangu
Vanhu vese, varume vevakadzi vanokwanisa kuita nguva yavasina hanya nokuvatana nomurume/mukadzi. Iyi inyaya yokuti dai vanhu vauinatsa kuhwisisa kuti inokonzera fungwa dzakaita sei mumusoro weumwe wako, waikasira kuigadzirisa.
Pane nyaya dzakawanda dzinoputsa dzimba dzevakaroorana. Nyaya yokusavatwa newe imwe yehuru dzacho. Kana uri munhu ane makore ari pasi pe 50, kufunga kuti umwe wako haana hanya nokuvatana newe chinhu chinoshungurudza zvokuti.
Kana chombo chisingamiri kana kuti usina zemo pamukadzi wako, chokutanga zvibvunze kuti kana uchiona kana kufunga vamwe vakadzi chombo chinomira here. Kana pasina chinochimisa, zvoreva kuti pane chikonzero chaunofanira kukasira kugadzirisa nokuti chokwadi ndechokuti musha wako uchaparara.
Pane zvikonzero zvimwe zvaunokwanisa kusafungira, sokuti:
Une chigwere che BP
Uri kumwa mushonga unoitisa kusamira kwechombo
Uri kushanda basa nguva yakarebesa
Uri kushanda pauri kufema poison.
Iwe kana mukadzi wako akambohura mukasaregererana zvakanaka
Mukadzi wako akazvara mwana. Mwana anoitisa murume ashaye nguva nomukadzi
Imba yamunogara haina kugara zvakanaka.
Hauna mufaro muupenyu hwako.
zvokudya zvako hazvina utano.
Kubatwa mazamu kunobatsirei?
Kubatwa mazamu zvakanaka nomurume wako kunoitisa zemo. Asi kubatwa mazamu nadhokotera kunoitisa kudikitira nokutya kuti pane chaangawana mumazamu.
Kana muchitamba nomurume pane pamuviri wako nzvimbo dzaanokwanisa kubatabata achitama nadzo, kana kukisa nomuromo, kana kusveta zvinova zvinoitisa zemo.
Mazamu, mutsiba, zheve, muromo, magaro, dumbu, matinji, zvidya, mabvi, bhinzi.
Zvese izvi zvinowedzera zemo. Kana watova nezemo kare, ukabatwa ganda chero papi zvapo unowedzera zemo.
Kana uchiti haadi kutamba newe pabonde uri kureva kuti haadi kumbotanga maitisana zemo mozovatana here kana kuti haatombodi zvokuvatana zvacho?
Kana asingafariri kumbotamba tamba muchibatana nokukiana nokupurudzirana nokukwenyana pamberi nokuzvetana minyatso, etc, iwe ndiwe unotomuratidza kuti zvinhu zvinotonakawo kuzviita. Unotanga nokunanzva zheve dzemurume. Hazviiti kuti unanzve agotadza kumira chombo. Unokwanisazve kusveta minyatso yake zvinova zvinomisa chombo zvakare. Unokwanisa kumukisa pamuromo, nokumupurudzira chombo wopota uchifuridzira. Kudziya kwemweya wekufuridza nawo kunomisa chombo zvinofadza chose. woziti waone kuti chamira chimbodetemba mutupo wake umuudze kuti kuona chimire kunokufadza chose.
Mangwana anokurega uchitambazve nacho mopedzisira moita tsika yokumbotamba musati mapinzana.
Kana asingadi kuvatana zvachose pane nyaya dzamunofanira kugadzirisa nokuti mucharambana nguva isina kupera yakawanda.
Ko vakadzi vanofarira here hurume.
Vakadzi vakawandisa vanofarira murume anoti pakuvatana obudisa urume hwakawanda huchipiwa mukadzi. Iyi inyaya yokuti zvinoratidza kuti anoda kuvata newe nomoyo wese. Kana murume akasabuda urume pakuvatana zvinoshungurudza mukadzi nokuti anoona sokuti haana kugona basa.
Kuchururuka mapedza basa zvinoratidza kuti wapiwa urume hwakawanda. Vazhinji tinokomburena hedu asi nechomumoyo kufara kuti murume wangu andipa hwakakwana nokuti anonakigwa nokundivata.
Asi chokwadi hacho ndechokuti chinowanza urume kuwanda kwemvura yaanomwa murume wako.
Chii chinoitika kana ukagarisa usina kuvata noumwe munhu?
Kana uri munhurume unotanga kuzvirotera (kubuda urume uri kuhope) Kana uri munhukadzi hapana chinoitika.
Kuzvirotera hapana chakwakaipa.
Ndakapiwa nhumbu nomurunyana. Ndodii?
Murume airwara pandakavata nomuningina wake. Ndakazoziva kuti ndine nhumbu murume ashaika.
Wakahura nehama yomurume murume ari mupenyu. Chiwana mukuna wekuzivisa murume uyu kuti wava nemimba. Wadaro kana ane mukadzi nechekare usada kupokanisa vaviri ava.
Rera mwana wako wakadzima kuti vanhu vakubatsire kurera. Usawanza nyaya dzako. Hatisi kuti reva nhema asi kuti dai wahwisisa kuti ndiwe wakahura saka chirega kuti chihure chako chikanganise upenyu hwevasina kuhura.
Kana ndichiswa nomurume wangu hapana chandinonzwa chandingati chinonaka. Ndingaitawo sei. Ndini here kana kuti murume ane diki.
Saizi yechombo handiyo inoita mukadzi anakigwe. Maitire amunoita ndiwo anoita munakigwe mese. Kana ichiti hapana zvainohwa handizivi kuti uri kuti hauhwi kuti chombo chapinda here kana kuti muchikoirana hauhwi kuti muri kukoirana.
Kana uchifunga kuti murume wako ane diki zvinoreva kuti iyewo ari kufunga kuti iwe wakakurisa zasi. Ngatichitarisa kuti chiri nyore kugadzirisa ndechipi. Hazviiti kuti murume akudze chombo chake chero zvodii. Asi munhukadzi anokwanisa kusimbisa masuru kusvika ava kugona kushinya chombo chero chesaizi ipi zvayo. Verenga pakahi kusimbisa masuru.
Mochinjazve maitire enyu. Ukavata nedumbu worega makumbo ari pamwe chete asi wongoti simudzei chiuno kusvika murume akupinza neshure, uchaona kuti unokwanisa kushinya chombo zviri nyore, uye chombo chinopinda chese zvichibva nokuti une muviri wakakura sei.
Ukavata nedivi murume wokutanyanga gumbo riri pasi woisa riri pamusoro pafudzi rake, murume anopinda zvinogutsa chose. Imozamai izvozvo.
Ndokubirawo rubatsiro. Ndakaroora muna March 2015 mukadzi wangu ndokuuya kuzogara neni. Before taingoonanana kamwe chete pamwedzi. Takatanga zvebonde muna November 2014.
Dambudziko nderokuti mukadzi wangu haaguti. Anoda bonde mazuva ese, pamwe kaviri pazuva. Zviri Normal here izvi.
Vese vachaverenga nyaya yako vachakutuka nokusaziva upenyu kwauri kuratidza. Kana muchangoroorana munoita nguva yakareba muchingoti chero pamawana mukana movatana. Ndizvo zvinoita vanhu vese vakaroorana zvorudo. Vakaroorana zvokutizira ndeimwewo nyaya.
Zvamuri kuita izvi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa mumba tsva. Iwe chirega kuona sokuti mukadzi wako haaguti. Ramba uchimupa zvaanoda uchiratidzawo kuti uri kufarira zvamuri kuita. Ukaita sokuti hazvikufadzi unoshungurudza mukadzi wako chose.
Chinhu chakanaka kuti munogara pakanaka pokuti munokwansa kuvatana zuva nezuva pasina anokukanganisai. Chiona kuti wafadzawo mukadzi wako. Mune rombo raknaka chose. Zvichazochinja mava nemwana nokuti munoshaya hope uye munoneteswa nokurera mwana. Rambai makadaro.
Kuti chombo chinzi chidiki chinenge chiri chidiki zvakadii?
Pane musikana akanditi ndine chomo chidiki saka zviri kundinetsa
Varume vakawandisa vanofunga kuti kukura kwechombo kune basa asi hakuna basa pakuvatana nomukadzi anoziva zvaari kuita. Chombo chinofanira kukura kupfuura 12cm kureba iye 13cm kukora (kusungwa nebhandhe rakareba 13cm)
Kana chombo chimire AVERAGE yokukura yevarume inoti.
Kureba 14 cm kukora 13cm Kureba kunopimwa pamusoro
Chitubu chemukadzi chakadzika 9 cm uye chinotatamuka pakupinzwa chombo saka hazvinei kuti chombo chakakora sei.
Ko CANCER yechibereko inoitiswa nei?
Cancer dzinoita pazvinhu zvokugadzira vana dzakasiyana siyana
Kunoti OVARIAN cancer inoitika panogadzigwa mazai
Koti CERVICAL cancer inoitika pamuromo wechibereko panopinda nourume muchiereko kana wavata nomurume
Cervical Cancer kazhinji inoitiswa nokuti munhu akatanga kuvata nevarume pasina makondomu iye musikana ane makore ari pasi pe 18. Zvinoreva kuti achazoita Cancer iyi ava munhu mukuru.
Ukavatazve nevarume vanopfuura 6 usingashandisi makondomu unowedzera chose chanzi yokuzoita CANCER iyi. Kuvenganisa urume hwevarume kunoitisa CANCER iyi.
Kotizve kana murume wako achihura nevakadzi vanohura nevamwe varume iwe uchizovata naye, unoita cancer iyi.
Asi kune zvimwewo zvikonzero zve CANCER iyi, sokuti kana mumhuri yenyu muine vanhu vaiita inokwanisa kuiitawo. GENETIC.
Ko chombo chihombe chinokwanisa kundikuvadza here ndikarara nemurume anacho?
Chombo chihombe chinokwanisa kukukuvadza kana warega chichikupinzwa usina kunyorova. Chombo chesaizi ipi zvacho chinokwanisa kukukuvadza kana usina kunyorova. Ndizvo uchiona kuti kana munhu ava munhu mukuru uye ajaira kugarovata nomurume, akabatwa chibharo nebhinya anokwanisa kukuvara. Hazvirevi kuti bhinya rine chombo chikuru asi kungoti mukadzi anenge asina kunyorova.
Kana wakanyorova chitubu chinotatamuka zvokukwanisa kuoindwa nechombo chero chikurusa, asi zvinoda wakarerusa muviri uye wakanyorova zvakakwana usingatyiswi nukupindwa nechombo chacho.
Kune mishonga yechivanhu yekukudza chombo here?
Mhinduro chaiyo yechokwadi ndeyokuti hakuna mushonga wakadai muchivanhu kana mune chimwe chirudzi. Kana ukatomuwana kasira kundiudza ndikubatsire kuita mabhiriyoni emaUSD emari nokuti vanhu vakamirira kuti kuwanikwe mushonga wakadai vakawandisisa.
Kana mukadzi wangu achihura ndingazviziva sei kuti anohura?
Kuti uzive kuti mukadzi anohura anenge iye atoda kuti uzvizive kuti anohura. Vanhukadzi vanokwanisa kukavhira zviito zvavo kupfuura varume. Ukazoona wobata munhukadzi kuti ari kuhura zvinoreva kuti iye atoda kuti umubate.
Kana uri munhu anongodawo hake kuziva kuti anohura here kana kuti haahuri, fungwa iyoyo kazhinji yabva pakuti iwe unohura asi haudi kuti iye ahurewo. Tsvaka mutikitivha atevere mukadzi wako kwevhiki mbiri akuudze zvese zvinoitika. Kupumha munhu uhure usina kumubata achihura handizvo.
Zvinorevei kana murume achiti kuzasi kwemukadzi kwakazara mvura.
Kana mukadzi akaita zemo, anonyorova zasi kuti kana opinzwa chombo vese murume nomukadzi vosasvuuka. Hino kune varume vanoti kana ane chombo chidikidiki mukadzi wake akanyorova zvakakwana, pakunopinza paya murume haazadzi chitubu chomukadzi saka friction inoita shoma. Murume pane kuti abvume kuti ndiye ane dambdziko, anokasira kupomera mukadzi mhosva asi ndiye apa mukadzi zemo kuti anyorove.
Kana ukaona uchinyatsonyorova chinja paitire amunoita pakupinzana, Vata nedumbu makumbo ari pamwe chete wosimudzira chiuno zvishoma murume opinza. Moita makadaro.
Unozviona sei kuti mukadzi anokwirisa.
Unoti kumukazi, "ndokumbirawozve kukukwira." Kana akati uya ukwire zvoreva kuti anokwirisa. Kana akaramba zvoreva kuti haakwirisi.
Mubvunzo wako hauna musoro zvachose.
Kuchemerera kuti zviya murume achikurhoja, kunaka kwazvinoita kunoita kuti usakwanisa kungonyarara zvichiitika asi kuti unochemachema kuita sokuti zviri kugwadza asi izvo zvichinaka. Kuchemerera i NOISE inoitwa, zvikuru nomunhukadzi pakuvatana. vakaita REASEACH vanoti munhukadzi kana akagadzikana hana anonakigwa kupfuura munhurume.
Ko kana une nhumbu chibereko chinobudisa tsvina here (mkuenda kumwedzi)
Kana wabata mimba zvoreva kuti hauchaendi kumwedzi kuzvika wazvara mwana. Kumwedzi kunoitiswa nokuti wakandira zai rikashaya urume hwekuiribatsira kutanga kugadzira mwana muchibereko. Ndizvo chibereko chiya change chagadzirira kuchengeta mwana chinobva chato bhowekana nazvo choramwa zvese zvachanga chagadzira kuti mwana azokuriramo. Ndizvo zvinobuda zvava ropa rokumwedzi. Ukafunga kuti une mimba, ukazoona woenda kudzi, ziva kuti hauna mimba.
Munhukadzi anobvumidzwa kubata chombo chomurume here pakuvatana?
Ndizvo chaizvo zvaunotobvumidzwa kuita sezvaanongobvumidzwawo kukubata pamberi pako achitotamba napo. Iwe tambawo nechombo chake. Chinhu chinonakidza chose kutamba nacho nokuda kwemaitire acho anotoshamisawo hawo.
Asi kana uchipinda Chechi yeChitawara havadi kuti mubatane pamberi kana kuita zvokupanana zemo muchipurudzirana magaro kana kusvetana mazamu, kana kuratidzana pamberi. Vanongoti mukadzi ngaavhurire murume, murume opinza, mokweshana zvopera. Havadi kuti munakigwe nazvo.
Ko kana mukomana andisinei naye akandibata mazamu ndoita sei?
Mukomana wausinei naye akakubata mazamu unofanira kukasira kuudza mapurisa asungwe nokuti hazvibvumidzwi pamutemo wenyika zhinji. Mukomana haafaniri kukubata mazamu, magaro, kana muviri wako kuzhe kwekuti achiita FIRST AID paita accident.
Ko chinonzi kutunda kwemukadzi pakusvirwa nomurume kuita sei. ?
Handina kumbozviitawo asi ndava nemwedzi mitatu ndaroorwa. Zvinoitwa sei?
Chii chingakonzera kuti ndisatunda?
Pavakadzi vakawanda vara rokuti kutunda haribatsiri hwisiso yedu nokuti ivara rakabva kuvarume. Murume anohi atunda kana aburitsira urume mukati mechitubu chomukadzi atunda urume. Pakutunda uku anonakigwa chose nazvo.
Mukadzi anonakigwa chose kana akapinzwa chombo akakoigwa nomurume chombo chichikwiza madziro echitubu zvinova zvinonaka. Asi panosvika nguva yaanonatsonakigwa zvakapfuuridza zvokuti kana kufema chaiko anombotadza. Kanguva aka kanoita kuda miniti imwe chete. Mukadzi anoshaya CONTROL yomuviri wake, zvinonaka, nokutyisa nokuvhundusa zvese pamwe chete.
Zvadaro anohi atunda asi hapana chinenge chatundwa chaicho. Vashomanana vanobuda mvura muchitubu inototiwo tsaaa tsaa seweti asi isingabudi muburi reweti.
Pachirungu kutunda kwemukadzi kunohi ORGASM kana kuti CLIMAX kana kuti PEAK. Zviri nani udzidzire kuita ORGASM asi zviri nyore kuzviitisa nokuzvikwiza bhinzi nemaoko pane kuitiswa nokuiswa nomurume.
Kana iwe muridzi usina kuzvidzidzisa kutunda zvinonetsa kuti utundiswe nokuiswa nomurume. Mhomho yese yevakadzi yauri kuona 30% chete ndivo vanogarotunda. Vamwe ava kuti atunde anoti paya avata nomurume, murume anokasira kupedza iye asina iye ozvipedzisa nemaoko.
Ndingaitawo sei. ndiri rovha uye murume wangu haana hanya neni zvachose
Kuva rovha kana kuti munhu aingashandi hazvichaiti mazuvano kana uri mukadzi/murume wemunhu. Unofanira kuwana chimwe chinhu chaunoita uchiwana mari chero mari yacho iri shoma hayo unofanira kuita.
Kushandira umwe munhu kunonetsa. Kuzvishandira kuri nani chose. Mabasa aunokwanisa kuita akawandisa. Kana usingahwisisi nditumira mwadhi kukero yangu inoti maichibwe@yahoo.co.uk
Vakuru vemusha wedu vari kuti mudzimu uri kuda kutaura pandiri. Zvinorevei?
Kuhi mudzimu unotaura pamunhu, zvinotaugwa nevanhu vava chembere vaya vanenge vaperegwa nokugwara kwemwana nechigwere chinohi pachirungu MENTAL ILLNESS. Kwedu kuvanhu vatema hatidi kungobvuma kuti mwana aita MENTAL ILLNESS pasina chikonzero chinoonekwa, saka tinonotsvaka zvikonzero kuvanhu vanonyeberawo kuti vanoziva.
Kana pane zvinoitika pauri zvaunoziva iwe, kasira kundorapwa nevarapi wovaudza zvese zviri kuitika voongorora zvakanaka wopiwa mishonga. Wotarisazve kuti muupenyu hako hauna STRESS pane imwe nyaya iri kukudya moyo. Kana kuti hausi kumwa imwe mishonga yausinanatsi kuhwisisa kuti inorapa chii. Ndinyorere nyaya yese titaure nokuti unokwanisa kutozokanganisika fungwa zvachose. Hakuna chinhu chinohi mdzimu. Kana munhu afa atofa haachakwanisizve kutaura nevapenyu chore tikada zvakadii kuti ataure nesu. Usaudzwa nhema navanhu.
Kurambidza mukadzi kushanda kwakanaka here?
Kune varume vasina CONFIDENCE pazviito zvevakadzi vavo. vanoona sokuti mukadzi akangobuda mumba ava kutohura. Zvinobva pakuziva kuti haasi kugutsa mukadzi mumba uye haazivi kuti oita sei panyaya yacho. Saka anopedzisira ava munhu anochengera mukadzi asi ipapo mukadzi hapana chaaita chakashata.
Vakadzi vakawandisa vanoshandira mhuri dzavo uye vanofarira varume vavo kana pasina zvakaipa zvinoitwa nomurume. Asi murume anoda kupiwa confidence nomukadzi wake kuti agadzikane hana. Ukaona murume achikurambidza kushanda haisi nyaya yekuti haadi kuti ushande asi kuti inyaya yekuti haazozivi kwauri nguva dzese. Munhu anofunga kuti mukadzi munhu anoda SUPERVISION kuti asahura.
Koitazve murume anoda kuti ushande asi usingazotambiri mari yakapfuura yake. Kufunga kuti unozofunga kuti ndiwe wava murume wobva wamudherera. Murume akadai zviri nani kungosiyana naye nokuti uchaitazve mamwe matambudziko.
Zvakanaka here kukwesha nhova?
Zvakaipisisa. Unokwanisa kuuraya mwana wako. Nhova hachisi chigwere. Nhova inoonekwa pamwana ari mucheche kana mabhonzo emumusoro wake asati asimba. Mwana anozvagwa akadai kuti musoro wake usanetseka kubuda nomuchitubu.
Zvadaro ukaona nhova yakaita gomba kana kuti ichitambatamba, zvinoreva kuti mwana ari kuda mvura yokumwa kana kuti mukaka. zvinoitiswa ne DEHYDRATION. Mwana haakwanisi kutaura kuti ari kuda mvura saka tinoona nemaitire enhova.
Usarapa nhova zvachose. unokuvadza mwana. Kune vana vakawanda chose vanofa nokuti madzimai avo havahwisisi nyaya yenhova.
Bonde munhu uchangobva kuzvara tinotanga kwapera nguva yakadii?
Verenga pakahi "Mimba yokutanga" uhwisise zvakanaka kuti munodzokera pabasa riini uye kuti unokwanisa kuita mimba here.
Zvinoda munatse kuzvihwisisa mese.
Mhandara musikana akaita seiko?
Mhandara musikana asina kumbovata nomurume. Hazvina basa kuti ane makore mangani. Vamwe vanotanga kuvata nevarume vari vanana (14-18) vamwewo vanotanga vava vanhu vabva zera, (18-25) Kozoita vamwe vanomirira kusvika vawanikwa. Koitazve vamwe vanopfuura makore 30. Hapana chakaipa asi kungoti ukatanga makore ari pasi be 18 muviri wako unenge usina kupera kukura saka zvinokonzera cancer yechibereko kukasirisa kutanga kuvata nevarume.
Zvinoita here kugara nomurume asina kupedza kuoora?
Zvinoita chose chose. Kuroora hakufaniri kupedzwa nokukasira. Chinobviswa imombe youmai chete inova inobvisigwa kuti muwane mvumo yokuvata mese uye kuhi mava murume nomukadzi. Kana mombe youmai yagamuchigwa wava mukadzi wemunhu wava nemvumo yokuti unokwanisa kuti murume akauya kumba kwenyu vabereki vanokupaimba yokuvata naye. Mukaenda kwake ndizvozvo futi.
Kuchemerera kwemukadzi pabonde kunorevei?
Kuchemerera kunoreva kuti mukadzi ari kunakigwa nezviri kuitika pakuvatana kwenyu. Vanhukadzi kazhinji vanonkigwa kupfuura varume, ndoosaka vasingakwanisi kungonyarara, zvikuru kana zvikatora nguva muchikoirana. Vanhukadzi vanoda nguva yakareba muchikoirana toti kupfuura maminitsi 10.
Q36 Ndibatsireiwo veduwe. Ndine dambudziko rokuti ndinoda kusvirwa nomurume wangu kakawanda zuva nezuva asi iye ari kuzvitadza.
Akaita kaviri pazuva oramba kuwerdzera. Vamwe munozviitawo sei nokuti ini zviri kundiremera. Ndinoda kakawanda. Hazviiti kuti varume vakwanise kuvata nevakazi vavo kakawanda mazuva ese. Panoitawo umwe musi waanozviita asi kwete mazuva ese. Kana achitokwanisa kaviri pazuva ari kugona basa chose asi chionai kuti pakuita ipapo wagutswa nazvo. Akatora nguva refu muchikoirana asina kukupa urume unokwanisa kunakigwawo kusvika pakuguta
Zvinokwanisika kuti pamuri kuita unosara une zemo zvinoreva kuti unokasirazve kuda kuvata naye. Pavanhukadzi vakawanda murume anokwanisa kaviri pazuva anotowonekwa somurume anogona asi zvichibva pakuti pamunoita mukadzi anogutawo.
Wanai mazano okuti udzidzise murume kukutundisa nemaoko. Mutaridze kuti angaita sei pabhinzi yako zvaunoita iwe kana uri wega. Kana azvigona izvozvo wopota uchimukudzira kuti agaroita.
Q37 Ko chii chinoita kuti chombo chimire? Chinoita kuti chombo chimire kana murume ane zemo ndicho chimwe chete chinoitisa kuti pamweri pemukadzi pazvimbirire kana mukadzi ane zemo.
Zemo rinotangira mufungwa. Fungwa ikangofunga chimwe chinhu chakarerekera pane zvokuvatana, unokwanisa kuita zemo muviri wese asi kungoti kuzasi ndiko kunoonekwa kuti pane zviri kuitika. Kwemungukadzi kunzozvimbirira uye anohwa kushosha nokunyorova. Bhinzi inokura yokira sezvinongoita zvombo chomurume. Mazamu anomira minatso. Murumewo anomira chombo
Zvese zvokumira zvinoitiswa neropa rinoti ukaita zemo romhanya rondozadza tsinga dzakawanda dziri pamberi.
Q38 Zvinoita here kuti ndivate nomukadzi wasekuru vangu. Mukadzi wenhaka? Kana sekuru vafa, pamutemo wechikaranga, unokwanisa kutaurirana nambuya vako moroorana mogara mese zvegugara nhaka. Kana sekuru vari vapenyu, hazviiti kuhura nambuya.
Pamutemo wemazuvano, hazviiti kutora mukadzi wafigwa nomurume kana usingazivi kuti chauraya murume wacho chii. Usati wavata nambuya vako endai mese kundotesitwa moudzwa pamuri. Kana muri vatsvene moronga yokuroorana.
Tichiongorora tichiona kuti iwe uri munhu anofaririra kuvata nevakadzi vevanhu, zvinokwanisika kuti iwe une chigwere saka unofanira kutesitwa nguva nenguva. Unofanira kushandisa makondhomu.
Q39 Murume anopedzisira kuvata nomukadzi anemimba riini?
Mukadzi wangu ane mimba asi tichiri kungovatana. Hapana nguva yokuti ungati hazvichaiti kuvata nomukadzi ane mimba. Zvinoita kuvatana mwana oda kuzvagwa chero kwasara zuva rimwe chete. Zvinongobva nokuti iye mukadzi wako anohwa sei nokuti pamwe zvinonetsa kuvata nomurume kana mimba yakurisa.
Chinhu chaunofanira kuhwisisa ndchokuti kana mukadza akanatso kunakigwa akaita ORGASM anokwanisa kutanga kuzvara. Saka kana mazuva ava pedo, itai henyu asi mohwisisa kuti zvokuvatana zvinokwanisa kuti mukadzi azvare mwana.
Vanambuya vanogamuchira mwana vairipisa murume kana vaona urume panozvagwa mwana kureva kuti nyakuzvara ange avata nomurume madeko. Saka vakawanda vanovatana mukadzi ane mia yakurisa. Hapana chakaipa. Vamwe vakadzi vanotoshusha murume kusvika abvuma kuvata naye.
Q40 Panoita nguva yokuti ndichirega kuvata nomurume here nokuda kwezera, kuti ndava munhu mukuru? Hakuna zera rokuti ungati hazvichaiti kuvata nomurume. Vanhu vakawandisa vava vanhu vakuru vanongovatana vachingonakigwa zvakangodara. Chinongonetsa munhukadzi ava mukuru ndechokuti anokwanisa kutora nguva kuti anyorove kuzasi kuti murume apinze chombo zviri nyore.
Asi somunhu mukuru hausvodi kuudza murume kuti hauna kunyorova saka ngaambowedzera kutamba nezvinhu makamirira. Iwewo mukadzi kutamawo nomurume sokuti kupurudzira chombo kuti chinatse kumira uye kufunga kuti chichakupa mufaro. Fungwa ndidzo dzinonyorovesa zasi.
Kana pasina kunatsonyorova murume anokwanisa kushandisa mate emumuromo kupfita pamuromo wechitubu asati apinza chombo. Mukadziwo kana achida kutanga asveta chombo kuti chinyorove anoita. Iko kusveta chombo kunowezeresa kunyorova zasi, uye kunowedzera kumra kwechombo.
Kune vakawanda vanovatana vava nemakore anopfuura 70 kana 80.
Munhukadzi anogarovata nomurume haakasiri kuchembera. uye haana dambudziko kuzasi. Vana mbuya naanasekuru vanotogaroisana chose asi kungoti pamwe vanoita kamwe chete pavhiki.
Q41 Ko sei mukadzi achibuda
mvura pakusvirwa? Mubvunzo wako ndiwo hawo. Munhukadzi wese kana akaita zemo anonyorova mukati mechitubu chake kusvika pakusinira zvinoonekwa nokunyorovesa bhurugwa. Kana akaita zemo chero ari kubasa anotonyorova zvokuti pamwe anofanira kutochinja bhurugwa nokuti zvinoitisawo hwema hunokwanisa kunhuwidzwa navamwe.
Kunyorova uku haisi mvura asi i oiri yakatsetseka chose zvokuti inoerera semvura. Kana fungwa ikangofunga kuti pano pangangoita chombo chinopinza muchitubu changu, chitubu chotogadzirira kupindwa, chozara oiri iya kuti pamunovatana musasvuuka pakukwizirana.
Murumewo kana ukamupurudzira chombo uchitamba nacho chimire unoona pobuda madomhwe eoiri yakatsetseka kupfuura mafuta e FACE cream. inonakidza kuzora pamimwe. Uku kuitirazve kuti pamunoisana musasvuuka.
Murume anoziva nezvevakadzi anomirira mukadzi onyorova ozopinza chomo. Kana ukapinza mukadzi asina kunyorova zvinogwadza mukadzi. Ndoosaka kubatwa RAPE kuchikuvadza mukazi.
Q42 Matinji emukadzi akaita sei Akada kuita semapapiro echipembenene toti rimwe bapiro uku rimwe uko buri pakati. Vamwe vana matinji makuru vamwe madiki vamwe akareba zvokutorembere, vamwewo madiki zvokuti haaonekwi kuzhe kwechitubu asi ukabhenengura maromo echituu unomaona.
Vakadzi vakasiyana siyana sezvakangoitawo varume. Vamwe vane bhinzi hombe vamwe diki. Matinji anozvimbirira nokunyorova kana muridzi ane zemo. bakubata anotsvedza. Anofarira kubatwa batwa. Kana waita zemo murume akakubatabata zvinonaka
Q43 Ukasamwa mapiritsi e HIV kwemwedzi wese chii chingaitika? Kana une HIV ukapiwa mapiritsi okumwa unofanira kuamwa nokuti ndiwo mushonga wacho. Kana ukasaamwa unokwanisa kubata zvigwere zvakawanda nokuti RESISTANCE yako inenge yakaderera.
Q44 Mukadzi wangu anoda kuswirwa mazuva ese. Ndoitawo sei? Vamwe munoita sei? Terera mukadzi wako nokuti ndiye anoziva zvaanoda. Isu hapana chatinokwanisa kutaura pazviri. Chii chauri kubvunzira mubvunzo uyu. Wakaroora wega mukadzi wako. Mukadzi asvika akataura zvaanoda kuti umuite. Chaipa chii ipapo. Vanhu vakawandisa vanovatana mazuva ese. Terera mukadzi wako.
Q45 Zvinoita here kuti murume anditundire muchibereko? Hazviiti. Chibereko chiri kure kusingakwanisi kusvikwa nechombo, uyezve hachina mukova unokwana chombo. Chombo chinogumira muchitubu, (mheche). Imomo chinosiya urume. Urume hunoziva kwekuenda nako kupinda muchibereko. Usaita hanya nokuti hunopinda sei. Hazvinei newe izvo. Chako kungopinzwa chombo muchitubu wopiwa urume. Wozoerekana wava nemimba.
Q46 Ndoitawo sei. Murume wango anofarira kundisvira ndakafongora. Ini ndotya kusura. Kusura hakunei kuti wakafonora kana kuti wakavata sei. Munhu wese anosura. Hakuna murume ane basa nokusura kana ava pakati pekurhojana nomukadzi wake. Iye anotosurawo futi. Uri kungozvinetsa nenyaya isina maturo. Fongora wakasununguka unakigwe nomurume wako.
Q47 Chii chinoitwa kumurume pabonde? Murume anobvisigwa bhurugwa, Omwiswa mazamu, oudzwa kuti isa ruoko pamberi apa ukwenyerere, okiswa, oswetwa chombo, opurudzigwa chombo kusvika chamira, opfekedzwa kondhomu, ovhurigwa makumbo, Ihi pinza chombo apa, oitigwa chikapa kusvika abuda urume. obviswa kondhomu, opukutwa chombo nepamberi. Oregedzwa omboita hope. Omutswa otangwa futi.
Q48 Chii chinoita kuti munhukadzi anakirwe pabonde. Kunakigwa komunhukadzi kwakasiyana nekwemunhurume uye kunobva pane zvakawanda zvinoti:
1 Maonere aanoita murume ari kumurhoja. Kana achimuda zvomoyo anonakigwa zvakawanda nokuti munhukadzi ane fungwa dzokuti kuiswa ndekwerudo.
2 Maitire avari kuita. Kana achifubga kuti maitire awa ndeemusikahwa anonakigwa zvakawedzera.
3 Makoirigwe aari kuitwa. Murume kana akapota achikoira akaruramsa mberi oitazve zvokukurungira osiyanisazve sipidhi dzake oti akawanza omboderedza, zvinowedzera kunaka.
4 Kotizve kana mukadzi achiziva paamire pamusoro pemimba sokuti anoda mimba here kana kwete uye ari kuda urume here kana kwete.
5 Kotizve murume akamunonokera kumupa urume zvinowedzera chose kunaka.
6 Kotizve murume ane urume hwakawanda anonaka kupfuura ane ushoma, kana wange wagara uchiziva kuti anowanza. Ukamutarisa kumeso kwake panguva yaanokupa urume unongohwa wega uchida kumuwedzera chikapa nokumubatirira. zvinofadza moyo.
Q49 Chii chinonzi mhata Buri rinobuda netsvina kana waenda kutoireti. vese vakadzi nevarume vane mhata nokuti vese vanoenda kutoireti.
Tarisa mazita nhengo dzomuviri wako apo pakahi "Mamirire akaita mukadzi/murume"
Q50 Chiiko chinokonzera munhukadzi katadza kana kunonoka kubata mimba? Verenga nyaya dziri pamaLINK andaisa awa.
Asi chikuru chinokonzera mukadzi kushaya mbereko Ndeizvi:
1 Murume assingabudisi urume hwakakora
2 Mukadzi asina PH balance mukati mechitubu chake zvoreva kuti urume hunofa husati hwasvika kuchibereko
3 Mukadzi achangobva pamapiritsi pasina kupera 18 months.
4 Mukadzi asingakandiri mazai.
Q51 Chii chandingashandise kudzora nhengo yesikarudzi? Kana usina kumbozvara mwana chitubu chako hachinei nokunetswa. Mamirire achakaita ndiwo mamirire achinofanira kutoita. Ukaona murume achikomburena kuti hamusi kukwizana zvakakwana pakuvatana zvinoreva kuti iye murume wako ane chombo chitete kupfuura zvevakawanda. Chombo chinofanira kukora kupfuura ma CENTIMETER 9. Varume mhomho yese vanopfuura 14 cm.
Kana wazvara mwana verenga pakahi "Kusimbisa masuru"
Q52 Ndiri kudanana nehama yangu yepedo pedo. Zvinoita here kukwirwa nehama? Kana ukangovhura makumbo iyewo akakumisira chombo, zvinhu zviviri izvi hazvirambi kupindana asi kuti kuvata nehama yako zvakangofanana nezvinoita mhuka dzakaita sembwa nemombe. Zvinoratidza kuti hauna njere.
Kozotizve ukaita mimba mwana anokwanisa kuva akaremera zvese mumuviri nomufungwa. Hachisi chinhu chinokurudzigwa uye munyika zhinji zvinotosungisa zvese nokusvodesa.
Q53 Kune mapiritsi okuti ndibate mimba nokukasika here? Ariko hawo asi hazviiti kungonomatenga. Unotonoongorogwa nemadhokotera woiswa papurogiramu yacho. Zvadaro vanokubatsira kubva pakugarira mazai ako kusvika panuzopiwa mapiritsi. Zvisati zvaitika izvi unotanga waongorogwa kuti chiri kukutadzisa kuita mimba chii. Pamwe murume wako haasi kukupa urume hwakakora.
Kune varume vakawanda chose, zvikuru avo vava nemakore anopfuura 40, vane urume hwakaremara zvokuti hahugoni kudhidha kundotsvaka muromo wechibereko kune zai.
Q54 Chii chingaitwe kumukadzi kuti asanyanya kunetsa mumba? Kunetsa mumba kwemukadzi kazhinji kunoonekwa pamaitire ake pazvinhu zvinoti:
2 Kufoya murume?
3 Kusada kuvaka musha, kungopedza mari pazvinhu zvisina maturo.
4 Kusaita hanya nezvinhu zvinokudza mhuri.
Zvese izvi zvinoonekwa nomurume akachenjera. Kana murume ari fuza haatombooni kuti pamusha pane dambudziko. Nyaya dzese idzi dzinobva pavanhu vanoroorana zviya zvokutizirana sokuti musikana oita mimba obva atizira mukomana, pasina charongwa pauviri hwavo. Kutizira kunoitika kana mukomana ari munhu asinawo nyere zvokuti anofarira kufambafamba achirhoja vasikana asingashandisi makondomu. Musikana mazuvano ukaona oita mimba, atosarudza kuita mimba.
tine makondhomu, toita mapiritsi emabato akasiyana. toitazve mamwe anoti ukamwa 72 hours dzapera kubva pakuiswa hauiti mimba.
Kuroorana zvokutizira kunoita kuti mutange kuvengana kazhinji saka munogarokonana mumba ndizvo zvinoita kuti mukadzi ahi anonetsa.
Pakadai kuti mukadzi adzikame anofanira kutaridzwa rudo nokugarorhojewa zvinotaridzawo kuti murume anofarira zviri pamukadzi wake. Varume hwisisai kuti chero mukakonana zvakadii nomukadzi wako kana kwasviba umburudzawo mukadzi womurhoja zvinotaridza kuti ndiwe murume mumba. Ukaita unyope apa mukadzi anogaroita nharo newe uye kukudherera. Kurova handiko. Chombo chete ndicho manyaradzamukadzi.
Q55 Kuhura kuita sei? Kuhura kuvata nomunhu wausina kuroorana naye, zvisinei kuti mapanana mari here kana kwete.
1 Kune mahurekadzi anohurira mari.
2 Kune mahurerume anohurira mari nevakadzi.
3 Kune mahurerume anohurira mari nevarume zvechingochani.
4 Kune mahurekadzi anohurira kunakigwa nokuiswa chete
5 Kune mahurekadzi anohi Small House dzevarume vane mhuri
6 Kune mahurerume anohi zvikomba zvevakadzi vane mhuri
7 Kune vasikana vanoona vanamai vavo vachihura vongotevedzerawo.
8 Kune varume vanongoda zvokuvata nevanhukadzi vavanopa zvinhu sokuti kupa munhu basa, kupa munhu Lift, kupamunhu pokugara, etc. Zvese izvi kuhura.
Latifa Chirwa said...
Chii chinonzi muroora